Talyaaniga (dark green)
w:it:ItaliaTalyaaniga, ama Jamhuuriyadda talyaaniga (Af-Taliyaani: Repubblica italiana) waa dawlad ku taala qaarada yurub. Waxa uuna xuduud la wadaagaa wadamada Faransiiska iyo wadanka Iswiisarland iyo wadanka Ostariya.
Wixi gaar ah
Waxay ku taalaa gacanka Itaaliya ee yurubta koonfureed, iyo labada jasiiradood ee ugu weyn badda dhexe sida Sasiiliya iyo Sardiiniya. Talayaaniga wuxuu soohdinta la wadaagaa wadamada kala ah Faransiiska, Iswiizerlaan iyo Isloveeniya.Labada gobol ee madax-banaan oo ah saanmarino iyo Faatikanaka waxay ku dhex yaalaan gacanka Talyaaniga.
Talyaani ama Itaaliya Waa dowlad yurub ah waxeyna dhacdaa Koonfurta qaarada yurub.Talyaaniga wuxuu ka koobanyahay 3 qeybood; Dhulka la xiriirsan yurub iyo 2da gaziirad ee lakal yiraahdo sicilia iyo sardegna.Dhanka woqooyi waxaa ka xiga talyaaniga buuraha Alpine. waxaana ku taala gudaha talyaaniga labo dowladood oo madax banaan oo kala ah; Faatikaan iyo Saan Mariino.